Wararka Maanta: Jimco, Mar 15, 2019-Weerarkii Masjidka New Zealand oo lagu dilay 49 ruux iyo cambaareyn caalami ah loo jeediyay
Camaareyn Caalami ah :
Ra’iisul wasaaraha dalka Fiji Frank Bainimarama ayaa yiri "Qalbiga ayaa jaban dadka reer Fiji, waxaana la murugoonaynaa dadka aan walaalaha nahay ee reer New Zealand". Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in dadka dhintay uu ka mid yahay hal ruux oo u dhashay Fiji ama laga yaabo in ay intaas ka sii bataan.
Ra’iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dadkiisu ay “garab taagan yihiin dhammaan dadka reer New Zealand ee ku jira wakhtigan madaw ee nacaybka iyo rabshadahu ay ka xadeen nabadda.
Ra’iisul wasaaraha UK Thirisa May ayaa cambaaraysay “weerarkan xannuunka badan” waxayna dirtay tacsi.
Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu foosha xumaa oo lagu qaado Masjid gudaha dalka New Zealand, dadka dhintay ayaa isku diyaarinayay Salaada Jicmaha.